YHT’nin Gelmesiyle Sivas’ta Turist Sayısı 3’e Katlanacak – RayHaber | raillynews
[17 / 01 / 2020] Ku dhammeynta qaddarka aaladda Pointstanbukart Qalabka Feejignaanta ee Adeegga	34 Istanbul
[17 / 01 / 2020] Duqa Magaalada Yavaş: 'Waxaan Dadweynaha Weydiisan Doonaa Khadadka Mitirka Dadweynaha'	06 Ankara
[17 / 01 / 2020] Taarikada Gawaarida ee Diiwaangashan Jasiiradaha ayaa loo gudbiyey IMM	34 Istanbul
[17 / 01 / 2020] Nidaamka Pool-ka Dadweynaha ee Kocaeli Pool Nidaamka Guud ee Golaha Dadweynaha ayaa meel mariyey Golaha	41 Kocaeli
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasImaatinka YHT, tirada dalxiisayaasha Sivas waxay ku sii badnaan doontaa 3
16 / 11 / 2019 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Imaatinka yht, tirada dalxiisayaasha Sivas waa la silcin doonaa
Imaatinka YHT, tirada dalxiisayaasha Sivas waxay ku sii badnaan doontaa 3; Booqashooyin iyo baaritaanno laga soo bilaabo maalintii ka horreysay Golaha Qaranka ee Sivas. Dr. Mustafa Şentop wuxuu xusey tabarucaada Tareenka Xawaaraha Sare ee Sivas kaas oo dhowaan shaqeyn doona. Şentop, YHT'nin imaatinka tirada dadka dalxiisayaasha ah ee ku sugan Sivas waxay laalaabi doonaan 3'e.
Head of Grand National Assembly ee Turkey Dr. Mustafa Sentop, Sivas si uu u sameeyo booqashooyin kala duwan iyo xafladda furitaanka Akademiga Sannad-dugsiyeedka 2019-2020 si ay uga qayb-galaan maalintii hore ayaa bayaanno muhiim ah ka dhigay Sivas. Şentop, oo booqday booqashadii ugu horreysay ee barnaamijkii Guddoomiyaha ee barnaamijka Sivas, wuxuu booqday degmada Sivas ka dib booqashadii uu ku yimid Hsein Bilgin'den oo heshay macluumaad ku saabsan shaqada. Isagoo ka hadlaya barnaamijka furitaanka ee Sivas Cumhuriyet University 2019-2020 Sannad-waxbarashadeed, Şentop, Afhayeenka Golaha Qaranka ee Qaranka Turkiga Dr. Mustafa Sentop, YHT, Sivas wuxuu kordhin doonaa tirada dalxiisayaasha 3 jeer, ayuu raaciyay. Şentop, '' in la tago meel la dego oo fududaato in la muujiyo in Madaxweynaha Sentop, '' East Express, oo soo jiidatay xiisaha weyn sannadihii ugu dambeeyay, waxaan rajeyneyaa in magaaladeena ay ku imaan doonto tareen xawaare sare sanadka soo socda. Taasi waxay noqon doontaa waqtiga u dhexeeya Ankara iyo Sivas 2 saac. Istanbul, Konya way fududaan doontaa inay timaado. Markaa, waxaan u maleynayaa in 600 ay martigelisay Sivas sanadkii hore ugu yaraan seddex jeer kun dalxiisayaal ah
Umadda Muslimka ah ee Turkiga 11. qarnigii, in kasta oo madrasadihii ugu horreeyay la aasaasay 17. Şentop wuxuu yiri kadib ilbaxnimadii qarnigii 20aad lumiyey heerkiisi hore, “Waxaan xubin ka nahay ummad aasaasay Nizamiye Madrasas qarnigii 11. Sannadka furitaanka madrasaha ugu horreeya waa 1067. Madrasas waxaa laga furay magaalooyinkeenna sida Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya intii lagu jiray muddadii Anatolian Seljuk State wuxuu Nizamiye Madrasas u qaatay tusaale. Xaqiiq ahaan, laba ka mid ah waa Buruciye Madrasah iyo Gök Madrasah kuwaas oo ah shaqooyin qarnigii 13. Si kale haddii loo dhigo, halka kuwa isku dayaya inay naga iibiyaan ilbaxnimada ay ku noolyihiin da'dooda mugdiga ah, waxaan ka furnay madrasas halkaas oo lagu dhigo maadooyinka xisaabta, caqliga, cilmiga sayniska iyo cilmiga. Nasiib darrose, horumarka ilbaxnimadu ma aha mid toosan. Iftiiminta da'deena dahabiga ah, oo bilaabatay qarnigii 10, waxay bilaabatay inay liidato kadib qarniyo dhowr ah. Ilbaxnimadeenii, oo la raaciyey oo lagu dayday boqollaal sano, ayaa bilaabatay inay hoos u dhacdo duullaanka Mongol, isbeddelka dariiqyada ganacsiga, xasillooni darrada siyaasadeed, khilaafyada diineed iyo tan diinta. Tan iyo qarnigii 17, ilbaxnimadeena ayaa lumisay gacanteedii sare. Waxaan bilownay inaan ku dayno kuwa na raacay. ”
Waxaan ahay Proud of Sivas
Sida laga soo xigtay xogta laga Institute Statistics reer Turkey ee dalkeenna waxaa ka badan 30 kun maktabadaha muujiyey Guddoomiyaha Grand National Assembly ee Turkey Dr. Mustafa Sentop, “Maktabadda qaranka ee 1, maktabadda jaamacadda 598, kunka maktabadda guud ee 162 halki. Kuwa kale waa maktabadaha iskuulka. Sivas waa magaalo muhiimad taariikhi ah iyo dhaqan leh oo ay tahay in lagu sharxo buugaag ku filan oo ay ku buuxiyaan ugu yaraan mid ka mid ah maktabadahaan. Sababtoo ah Sivas waa marqaati dhow oo ku saabsan Sannadkeena 1000 ee Anatolia, marka laga reebo waqtiyadii hore. Seljuk, urub iyo jihada bixisaan in muddada Republic of Turkey. Haddii aan haysanno maanta dowlad xor ah oo madaxbanaan, Yigidos waxay leeyihiin xuquuqo aad u weyn. Waa inaan keennaa xuquuqdan. Sababtoo ah saddexda qaaradood, toddobo awoowe oo xukumay toddobadii badmaax ee iloobey guulihii ay ka soo hoyeen gacan yaraanta kalsoonida ka qabay buun-buunada iyo isbahaysiga waxay u soo bandhigaan inay iska tuuraan madax-bannaanida buuxda ee geesiyaasha waxay sii waday martigelinta himilada madax-bannaanida. 108 wuxuu martigaliyay shaqaalaha halganka wadankeena wuxuuna u furay wadada madax banaanideena. Sanadihii sanadihii ummaddeenna dab lagu tijaabiyey, Gazi Mustafa Kemal wuxuu gaadhay sharafkii ay wehelinayeen Atatürk iyo asxaabtiisa. Waqtigan xaadirka ah, maahan oo kaliya meeshuu juquraafi yahay, laakiin sidoo kale qiimeynteena taariikhiga ah iyo dhaqankeena waxay muujiyeen in waddankeenu uu caymis yahay. Sidaa darteed, waan ku faraxsanahay Sivas, waan u hambalyeynayaa walaalaha Sivas, ”ayuu yidhi.
Sivas, Magaalo Weyn
Sivas waa magaalo leh astaamo leh soo jiidashada dareenka qof walba taasoo muujineysa in Barlamaanka Sentent Şentop, “Qof walba wuu arki karaa meelkastoo ay fiiriyaan. Sivas, qaasatan kuwa ka shaqeeya militariga halkan waa magaalo aysan iloobin dhaxanta. Xitaa xilliga qabowga, 'Asal ahaan waxaan ka imid Erzurum, laakiin waxaan ku noolahay Sivas' waa magaalo uu yiri. In kasta oo ay qabow tahay, Sivas waxay leedahay astaamaha isku-dubaridka qaybaha bariga iyo galbeedka Anatolia. Boqolaal gabayayaal ah, qoraayaal iyo farshaxanno ay ka mid yihiin Pir Sultan Abdal, Asik Veysel, Kul Himmet, Sefil Selimî, Muzaffer Sarzensözen ayaa ku koray dhulalkaas maxaa yeelay waxay saldhig u ahayd dhaqan hore. Ilaa qarnigii 16, waxay ahayd mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee Wadada Silk taariikhiga ah. Maanta waxay leedahay qiimo isku mid ah. 28 waa gobolka labaad ee ugu weyn Turkiga kadib Konya oo leh cabbirkeeda juqraafi ahaan kun 500 km². Markhaatiyada ugu muhiimsan ee booskeenna taariikhda ilbaxnimada waa Gök Madrasah, Buruciye Madrasah, Masjidka Ulu iyo Behram Paşa Han. Masaajidka weyn iyo Guriga Caafimaadka ee ku yaal Divrigi, oo lagu soo daray Liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO ee 1985, waa dukumenti muhiim ah oo muujinaya heerka ilbaxnimadeenna. Laga soo bilaabo 700 ilaa Anatolia, qaranka Turkiga, oo guri ka dhistay Anatolia, wuxuu la yaabay heerka ilbaxnimada ee laga dhisay Sivas, Waxaan si xoog leh kuugula talinayaa inaad soo booqato. ”
Dib u eegis taariikheed Gökmedrese
Iyada oo lafiirinayo xiriirada gobolka Sivas, shaqadii dayactirka ayaa lasoo gabagabeeyey Gök Medrese waxaa booqday gudoomiye Salih Ayhan, oo xog kahelay gudoomiye Salih Ayhan kuna hambalyeeyay kuwa tageeraya soo celinta taarikhda taariikhi ah ee u adeegi doonta Matxafka Aasaaska. (Sivaskeena)
YHT ayaa qayb ka ah kordhinta tirada dalxiisayaasha u yimaada Eskisehir
Tirada gawaarida ayaa labalaabi doonta İzmir Metro
Tirada haweenka ee nidaamka tareenka ayaa labanlaabaya
Baabuurta Ordu Boztepe waxay kordhisay tirada dalxiisayaasha
Hawlaha sahan ee sahanka goobta waxay ka bilaabmeen waddada uu YHT ka gudbi doono
YHT waa qoraalka Ankara Eskisehir
Uludag Cable Line si loo gaaro hudheelka ayaa labanlaabaya
Qiyaasta 52 ee warshadaha difaaca ayaa labalaabi doona mashruuc weyn
Awood maalmeedka ayaa la kordhin doonaa iyada oo la iibsanayo tareen cusub oo cusub ee Izban.
Foomka Canshuurta Garoonka Diyaaradaha Istanbul Oo Lagu Furan Yahay! Waa halkan Tarif cusub!
Dhererka Nidaamka Tareenka ee Istanbul wuxuu ku labanlaabi doonaa 5 sano
Agaasimaha Cusub ee TCDD ayaa booqashadiisa ugu horeysay ku tagay Sivas
'Tekayyüdat' wuxuu ka sarreeyaa xarumaha Anatolian oo isku xira YHT
Wasiiradu waxay doorbidaan YHT Bakan
Sumoobida dukaanka YHT ee Ankara
Sivas Khadka Tareenka Xawaaraha Sare
Jawaabta Sharciga TCDD: 'Waxay sii wadayaan inay qariyaan kuwa masuulka ah'
Duqa Magaalada Yavaş: 'Waxaan Dadweynaha Weydiisan Doonaa Khadadka Mitirka Dadweynaha'